စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 11:20:00 PM
ဟိးးစားချင်လိုက်တာနော်....နောက်နေ.၀ယ်ရင်ပိုဝယ်ထားနော် ဟိ လားစားမယ် လိမ်မော်သီးလေးပါ အပိုဆောင်းး :D
Mon Nov 27, 06:22:00 AM 2006
ငါးနဲ့ ငှက်ပျောအူနဲ့ချက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလေ့့့  မော်လမြိုင်မုန့်ဟင်းခါးကို ပိုကြိုက်တယ့့့်  ဒါပေမယ့် မုန့်ဟင်းခါးဆိုတဲ့ အသံကြားလိုကကတော့ ဘာမှ မေးမနေနဲ့ သွားရည်တမြားမြားကျပြီးသာ့း့့  မုန့်ဟင်းခါးစားပြီးရင် ရေနွေးသောက်ရတယ် အဲ့ဒါမှ ရင်မပူမှာ့့့ 
Mon Nov 27, 09:03:00 AM 2006
မီးသော် ကရင်မုန့်ဟင်းခါးက ငါးပိစော် နံတယ် ဘာဖြစ်လုို့လဲ ဒုို့ ယပလက် မှာနေတုန်းက ကရင်တွေရောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးသွားစားတာ ငှက်ပျောအူနဲ့ ငါးအတုန်းလုိုက်နဲ့ ပဲသီးကလဲ အတောင့်လုိုက်ပေးတယ် နံနံပင်လည်း အစီးလိုက်ချပေးတယ်..
Wed Sep 22, 01:00:00 AM 2010
mohammad salleh mohammad salleh said...
ကုလားပဲကို ပြုတ်ချေပြီး ငါးဆီသတ်နဲ့ ချက်တယ်။ ငါးကို ဆီသတ်တဲ့ချိန်မှာ စပါးလင်ကို ညက်နေအောင် ထောင်းထားတာရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းထားတာရယ်၊ ကြက်သွန်နီကို ထောင်းထားတာရယ်၊ ဂျင်းကို ထောင်းထားတာရယ်ကို အားလုံးရောပြီး ဆီသတ်လိုက်တယ်။ ငရုပ်သီး အနုမှုန့်ကို နည်းနည်းထည့်တယ်။ အဲလို ဆီသတ်ပြီး ကုလားပဲပြုတ်ပြီး ချေထားတဲ့ အထဲထည့်လိုက်ပြီး ကြက်သွန်နီဥတွေ၊ ငှက်ပျောအူတွေ၊ ဘဲဥတွေ ထည့်ပြီးတည်တယ်။ let's me know please , how to cook that ?
Tue Aug 09, 01:59:00 PM 2011